Focus on Heat saar ee R & D iyo Warshadaha
Aquark waa pool inverter saaraha a bamka kulaylka xirfadeed ee Guangdong, Shiinaha. Waxaa la aasaasay koox khubaro ah oo leh 20 sano oo waayo aragnimo xirfadeed bamka kulaylka.
Aquark ayaa koox ka mid ah samaynta warshadaha dareen. Way maamuusi suuqa & macaamiisha iyo in la abuuro design cajiib bulukeeti Mr. aamusnaanta. Waxay hayn doonaa abuuraya naqshado more caan ah oo waayo-aragnimo macaamiisha ugu fiican.
xoogga xudunta u ah Aquark waa kooxda R & D ah, leh technology ugu horeeysa gacanta inverter nidaamka iyo sidoo kale pool nidaamka bamka kulaylka technology. Injineer kasta waxaa ka buuxa fikrado in ay jebiyaan oo technology dhaqanka ee bambooyin kulaylka pool, bixiya brand xal cusub si aannu wada-hawlgalayaasha caalamiga ah.
Production Tayada adag